Blogger a Haven maka Black okpu SEO | Martech Zone
Blogger a Haven maka Black okpu SEO
Sunday, Jenụwarị 11, 2009 Tọzdee, Ọktoba 29, 2015 Douglas Karr
Ezigbo enyi na onye ndụmọdụ, Ron Brumbarger tụbara m akwụkwọ n'ụtụtụ a na njikọ na-enye nsogbu na blog na Blogger nke gbadoro na Alerts Google maka ụfọdụ mkpụrụokwu ọ na-eso. Agaghị m emegharị isiokwu ndị a ebe a, ebe m achọghị ka ndị ọbịa m na-ejikọ ma ọ bụ na-eleta blọọgụ ahụ, mana nchọta ahụ na-enye nsogbu. Nke a bụ akụkụ nke ederede site na blọọgụ achọtara m njikọ na:
URL na aha nke blọọgụ a na-egosi na ọ ga-edekwa koodu n’otu n’otu ka onye okike wee nwee ike soro nsonazụ ya. Gụnyere na posts bụ ọdịnaya nke atọ nke fesara ya na mkpụrụ okwu obi ike - ọ na - egosi ịnwale njupụta isiokwu. Nakwa, enwere backlinks na blọọgụ ndị ọzọ na-anwale isiokwu ndị ọzọ… nzọ ụkwụ na-aga n'ihu ma na n'ihu.
Blọọgụ a na-ekwu okwu apụtaghị na ọ na-ezu ohi ọdịnaya ọ bụla, naanị na-etinye ụfọdụ nyocha ụfọdụ nke okwu na ahịrịokwu igodo. Otu ihe kpatara ụjọ a bụ na ha nwere ike ịnwale ka ha nwee ike gbakọọ otu esi emeri usoro ndị ahụ na igwe ọchụchọ. M hapụrụ Ron mara ma zigara ya njikọ Gerdị ịkọ akụkọ Blogger's Spam Blog; olile anya, a ga-emechi ya ozugbo yana blọọgụ ndị ọzọ metụtara na-ejikọ na site na ha.
O juru m anya na e nwere ndị spammers nọ ebe ahụ na-anwale usoro ndị a. Otú ọ dị, ọ tụrụ m n'anya na nke a na-eme kpọmkwem n'okpuru imi Google! Matt Cutts na-arịọ ụfọdụ echiche banyere ihe Google kwesịrị ịkwado webspam na 2009 - ma eleghị anya, ikpo okwu nke ha kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa!
Daalụ maka ime ka m mara ma dee banyere Ron! Ron bụ president nke Bitwise Solutions, a Premiya ike ebe a na Indianapolis na-eme ụfọdụ ịtụnanya ọrụ mba na Nkwalite na mwekota Microsoft Sharepoint.
Tags: nwa okpuokpu ojii seookpu ojiinwalee seoBloggergoogle +akpụkpọ anụ mattMicrosoft Sharepointron brumbarger
Ihe Uto Twitter Na-eto?
Akwụkwọ ndekọ aha Web Gal
Ọ bụrụ na ị nyere Google nchekwa data ike ikwu okwu wee sị "gwara m banyere ụgbọ elu na Chicago" nke ahụ nwere ike dị nso na ihe ọ ga-ekwu. Enweghị onye na-ele anya n'ubu ya nchekwa data enweghị isi.
Ọ ga-enweta ibu isiokwu ahụ nke ọma. Ọ ga-enweta ọnụọgụ ngwaa / aha / okwu nkwụsị nke ọma. Ọ ga-enweta ọtụtụ ihe mgbagwoju anya ndị ọzọ nke ọma mana ọ gaghị enwe isi ọ gwụla ma ọ na-ekwughachi okwu ọnụ.
Ọ bụghị ihe ijuanya ịhụ nke a, ọ dị ka 2010 nwere ike ịbụ afọ brute Force tactics weghara ebe ndị spammers na-ebute nsonaazụ ọchụchọ dị oke egwu mgbe Google na-aghọ draconian na-achọ ngwakọta okwu zuru oke tupu ịnyefe ibe otu nsonaazụ. .
Ọ ga-amasị m ịnụ ọtụtụ ihe nchoputa gị Doug ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ga-esi na nke a pụta.
George dw Ndị ọrụ ugbo
Okwu abuo gara aga adighi ka spam???
Blah a masịrị m blọọgụ gị, m ga-alọghachi wee lelee ya wdg….,
Ugbu a ha nwere PR3 Backlink hmmmm…
Ọfọn, agaghị m biputere njikọ lol onwe m 🙂
Ọgọstụ 5, 2009 na 12:46 ehihie
Anaghị m etinye oke ibu na Pagerank - M na-akwụ ụgwọ dị ukwuu na ọkwa nke ọma maka isiokwu ndị na-adọta ọtụtụ okporo ụzọ. Blọọgụ a dabara nke ọma na narị mkpụrụokwu. Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere PR9? N'ezie! Enweghị m ike ikpebi nke ahụ, n'agbanyeghị. Enwere m TONS nke backlinks na nnukwu akụkọ ihe mere eme - amaghị m ihe kpatara PR m ji dị ala.
Daalụ RE: SPAM. Anọ m na IntenseDebate ugbu a ma na-agbalị ịchọta otu esi achọta okwu ochie ndị a iji kaa ha dị ka spam!
Ọgọstụ 5, 2009 na 12:47 ehihie
Daalụ RE: SPAM. Anọ m na IntenseDebate ugbu a - ejighị m n'aka ka ha si mee ka ọ gafee. Ha agaala ugbu a!